သစ္စာအလင်း: Permaculture (9)
နယျ မွစေညျးခွား အကြိုးတရား Ecotone and Edge Effect ကိုနားလညျခွငျး
Permaculture ရဲ့ အခွခေံ အယူအဆ တှကေို ထိတှေ့ အသုံးခြ မိသျောလညျး ဘာကွောငျ့ ဒီလို လုပျတယျ ဆိုတာ သိပျတော့မသိလှပါ…။
Permaculture Design တှေ မှာ ဆို ခရုခှေ လို မွေ ကိုမွငျ့တငျ တဲ့ ဒီဇိုငျး တှေ တှေ့ မိသလို ဖွောငျ့တနျးသော မဉျြးထကျ မဉျြးကှေး မြား ကို အားအငျ တဈရပျ ဖျေါ ဆောငျသလို အသုံးပွုစိုကျ ပြိုးထားတာ တှေ့ ရတဲ့အခါ…သခြော လလေ့ာ မှ ဖွဈတော့မယျ ဆိုတာ ကြှနျမ သဘောပေါကျမိပါတယျ…။
ပွီးခဲ့တဲ့အပိုငျး မှာ Guild အကွောငျး လေးကိုသခြော မိတျဆကျခှငျ့ရတာကိုကြှနျမ ဝမျးသာမိခဲ့တယျ ..။ နောကျဝေါဟာရ တဈခု ကို ဒီတဈခါ မိတျဆကျပေးခငျြမိပါတယျ…။ အကောငျးဆုံးသော အကြိုးသကျရောကျမှုမြားအတှကျ နယျမွေ ၂ခုကွား အစှနျးနှငျ့သဘာဝပုံစံမြား ကို အသုံးပွုခွငျးကွောငျ့ အင်ျဂလိပျလို Ecotone, Edge Effect ကိုကြှနျမ က *နယျမွစေညျးခွား..အကြိုးတရား *လို့ နာမညျ ပေးလိုကျမိပါတယျ…။
ကြှနျမ တို့ စိုကျပြိုး ရေး ပွုလုပျတဲ့ အခါ သကျရှိမြိုးစုံပါဝငျတာ ဖွဈလို့ သူ့ ဂဟေစနဈ နဲ့ သူ ရှငျသနျရပျတညျကွပါတယျ…။ အဲလို ဂဟေစနဈ မြားစှာပေါငျးစပျပါဝငျတဲ့အခါ တဈခု နဲ့ တဈခု ကွား မှာ နယျစပျ….(Edge )ဆိုတာ ရှိတတျကွပါတယျ..။
သဘာဝ အတိုငျးရှိနတေဲ့ Edge တှေ ကိုပွနျလညျ စဉျးစားနိုငျပါတယျ…။ အဲဒီသဘာဝ ကိုတုပ ပွီး ကြှနျမတို့ Permaculture Design မှာ ထိုအကြိုးတရားကို ရရှိအောငျ ရေးဆှဲ စိုကျပြိုး ကွပတယျ..။ ဒီလို တုပခွငျးဖွငျ့ ဇီဝမြိုးကှဲကွှယျဝ မှု တိုးပှားတာသလို ကုနျထုတျစှမျးအား လညျးတိုးတကျလာစပေါတယျ..။
နယျ မွစေညျးခွား အကြိုးတရား Ecotone and Edge Effect အကြိုးသကျရောကျမှုသညျဂဟေစနဈဆိုငျရာအယူအဆဖွဈ ပါတယျ…။ ဒီအကွောငျး တှေ Ecology မှာသငျခဲ့ဘူးတာမို့ ဆရာဆရာမ တှေ ကိုတကယျပဲ ကြေးဇူးတငျ မိပါသေးတယျ..။
Edge ဆိုတာကတော့အင်ျဂလိပျစကားလုံး ဖွဈတဲ့အတှကျ တိုကျရိုကျ အစှနျး( စညျးခွားနယျမွေ) လို့ တိုကျရိုကျအဓိပ်ပါယျ ပွနျလို့ ရသျောလညျး ၊Ecotone ဆိုတာကတော့ ဂရိ စကားလုံး ဖွဈပါတယျ..။Eco+ Tonos = Ecotone ဖွဈလာပါတယျ…။
Tone = Tonos = Tension လို့အဓိပ်ပါယျရပါတယျ…။ ဂဟေစနဈ ၂ခု ဆကျစပျတဲ့ နယျ ခွား မှာ ဆကျစပျတဲ့ ဂဟေ စနဈ ထကျပို ပွီးအကြိုးမြား တဲ့ အနအေထားကို ဆိုလိုတာ ဖွဈပါတယျ…။
၁။ပငျလယျ ကမျးခွေ (ပငျလယျ ဟူသောဂဟစနဈ နဲ့ မွပွေငျ ဟူသောဂဟေစနဈ ဆုံဆညျး တဲ့နရော)
၂။ သဈတော နဲ့ မွကျခငျး ဆကျစပျတဲ့နရော
၃။ မွဈနဲ့ ပငျလယျ ဆုံစညျး တဲ့ မွဈဝကြှနျးပျေါ လိုနရောမြား …စသညျဖွငျ့ မြားစှာ ရှိပါတယျ…။ ထိုနရော တှရေဲ့ ထူးခွား မှု တှေ အကြိုးကြေးဇူတှကေို စဉျးစားနိုငျရငျ ကြှနျမ တို့ Edge Effect တို့ Ecotone တို့ကို အတျောအတနျ သဘောပေါကျမိပါလိမျ့မယျ ..။
ဂဟေ စနဈ ၂ခုရဲ့ အစှနျးတှေ ဟာ ထပျနတေတျပါတယျ..။ ထို ဂဟေစနဈနှဈခုရဲ့ အစှနျး မှာ သငျသညျ ဤဂဟေစနဈနှဈခုလုံးမှမြိုးစိတျမြားအပွငျဂဟေစနဈနှဈခုလုံးတှငျမတှရေ့သျောလညျးအနားနှဈဖကျကွားရှိအကူးအပွောငျးဇုနျ၏အခွအေနနှေငျ့အံဝငျခှငျကဖြွဈသောထူးခွားသောမြိုးစိတျမြားကိုသငျတှရှေိ့နိုငျပါလိမျ့မယျ ..။
ပထမဆုံးသော ဂဟေစနဈဆိုငျရာဝေါဟာရအခြို့ကို ရှငျးလငျးပွတျသား စှာ သတျမှတျရမယျ ဆိုလြှငျ Edge သညျ ဂဟေစနဈ ၂ ခု ထိစပျသော စညျးရိုး လို့ သတျမှတျပွီး
Ecotone ကတော့ထို မတူကှဲပွားတဲ့ဂဟေစနဈ ၂ခု ထိစပျလို့ ဟိုဘကျ နဲ့လညျးမတူ ဒီဘကျနဲ့ လညျးမတူ တဲ့နယျ မွေ တဈခု နယျနမိတျ မကျြနှာပွငျကို ချေါတာလို့ သတျမှတျရပါမယျ..။
Edge ပတျ ဝနျးကငျြဟာ ဂဟေစနဈ နယျနိမိတျမြားစှာ မှာ သဘာဝကကြဖြွဈပျေါလရှေိ့တတျပါတယျ..။
ဖျေါပွထားတဲ့ ပုံကိုကွညျ့မယျ ဆိုရငျ Edge Effect ကိုရှငျးလငျးစှာသိမွငျနိုငျပါတယျ…။
ဒီ ဥပမာ မှာ ဂဟေစနဈတဈခုစီ ကို A နှငျ့ B လို့နာမညျ ပေးထားမယျ ။ ဒီဂဟေစနဈ ထဲ မှာ လေးထောငျ့ နဲ့ အဝိုငျး အနီရောငျ၊ အပွာနှငျ့အဝါရောငျမြိုးစိတျသုံးမြိုးသာရှိပါတယျ..။
ဂဟေစနဈ A မှာ လေးထောငျ့ ပုံစံ ဖွငျ့ကိုယျစားပွုသောမြိုးစိတျ ၃ မြိုးပါဝငျပွီးဂဟေစနဈ B တှငျ ၃ ကိုစကျဝိုငျးမြားဖွငျ့ကိုယျစားပွု တဲ့မြိုးစိတျ ၃မြိုးပါဝငျပါတယျ..။
Ecotone ဟုချေါသော ဂဟေ စနဈ ၂ခုထပျနတေဲ့ အဝနျးအဝိုငျး မှာ အနီရောငျ၊ အပွာနှငျ့အဝါရော. လေးထောငျ့ကှကျလေးမြား နှငျ့စကျဝိုငျးမြားရှိ နသေလို
လေးထောငျ့နဲ့ စကျဝိုငျးပေါငျးစပျမှု (မြိုးစိတျခွောကျခုကိုကိုယျစားပွုသော) ထူးခွားတဲ့ အခွအေနမြေားကိုဖွဈပျေါစတော တှေ့ ရမှာ ဖွဈပါတယျ..။ ယခုပုံ မှာ Ecotone အတှငျး အနီ၊ အပွာနှငျ့အဝါရောငျတွိဂံမြားအဖွဈကိုယျစားပွုသောမြိုးစိတျအသဈသုံးမြိုးကို ဖွဈပျေါနထေိုငျဘို့ အားပေး ထောကျပံ့ပေးနိုငျတာတှေ့ ရမှာဖွဈပါတယျ..။
ဒါ့ကွောငျ့ဂဟေစနဈ A နှငျ့ B တဈခုစီတှငျမြိုးစိတျသုံးခုပါ ၀ ငျသျောလညျး ထပျနသေော ကူးပွောငျးရေးဇုနျEcotone တှငျမြိုး စိတျ ကိုးခုရှိ တာ ကိုတှရေ့မှာ ဖွဈပါတယျ..။
Edge Effect and Ecotone ကို သဘောပါကျပွီ ဆိုလြှငျ ဒီသဘာဝ သဘောတရားကို ကြှနျမတို့ Permaculture မှာဘယျလို အသုံး ခမြှာလဲ ကို ဆကျလကျလလေ့ာကွညျ့ ရပါမယျ..။
အဲလို နရောမြိုး ဖွဈအောငျအတုယူ တညျဆောကျ ကာ ဒီဇိုငျးရေး ဆှဲရပါတယျ..။ သီးခွားဂဟေစနဈနှဈခု ထကျကှဲပွားတဲ့ မြိုးစိတျမြား မတူကှဲပွားစှာပါဝငျနထေိုငျလာ ပွီးအောကျပါအကွောငျးမြားကွောငျ့ကုနျထုတျစှမျးအားသိသိသာသာမွငျ့မားလာတာတှေ့ ရပါတော့တယျ..။
ဂဟေစနဈနှဈခုလုံးမှအရငျးအမွဈမြားကို ထို တဈနရောတညျး တှငျရယူနိုငျပါတယျ..။
လထေုအပူခြိနျ၊ စိုထိုငျးဆ၊ မွဆေီလှာအစိုဓာတျ၊ အလငျးရောငျရရှိမှု စ တဲ့ အခွအေနမြေားအားလုံးဟာ Ecotone မှာပွောငျးလဲသှားပါတယျ..။
ထိုနရောမြား ဟာ မတူညီ ပဲကှဲ ပွား တဲ့ မြိုးစိတျမြားကို အထောကျအကူပွုနိုငျသညျ့ microclimates ( ရာသီဥတု အငယျစား) ကိုရရှိအောငျ ဖနျတီးနိုငျပါတယျ..။ဒီသဘော ကိုကိုယျ့ခွံမွေ အပွငျ ကိုယျ့ရှာ..ကိုယျ့မွို့ ရဲ့ Microclimates ဖနျတီးကွဘို့ သွဂဲနဈ သငျတနျးတှေ မှာ ကမနျမ ကွိမျဖနျမြားစှာ ပွောပွခဲ့ဘူးပါတယျ..။
အနားတဈလြှောကျရှိအပငျမြားသို့ အလငျးပိုမိုရရှိ တယျဆိုတဲ့အခကျြက အပငျမြားပိုမိုထောကျပံ့ရနျ (ပိုမိုမတူကှဲပွားခွငျး) ဖွငျ့ ဇီဝမြိုးကှဲ တှတေိုးတကျမြားပွား စပွေီး စိုကျပြိုးရေး ထှကျကုနျမြား ထုတျလုပျမှု စှမျးအား တိုးတကျစဘေို့ တို နရောမြား ကကူညီထောကျပံ့ပေးပါတယျ…။
ထို နရောမှာ တိုးပှားလာသောအပငျမြိုးစိတျမြား ဟာ အပငျစားသုံးသော အငျးဆကျပိုး တှကေို စားသောကျ နှိမျနငျးပေးတဲ့ သားရဲကောငျ မြားကိုတိုးပှားစပေါတယျ..။
အပငျအနိမျ့အမွငျ့အလိုကျ ခိုလှုံ တဲ့ ငှကျမြိုးစိတျ တှေ ကိုတိုးပှားစပွေီးနောကျဆုံးတှငျစိုကျပြိုးရေး အကြိုးပွု သကျရှိ သတ်တဝါတှေ ရဲ့ ခိုလှုံနထေိုငျရာ နရောဖွဈလာပါတော့တယျ..။
Ecotone နရောတှေ ရဲ့ အကြိုးကြေးဇူး သကျရောကျမှု
နောကျ ဝေါဟာရ တဈခုကတော့ ကြှနျမ အလှနျနှဈသကျ မိပါတယျ..။ အင်ျဂလိပျလို ပဲမှတျကွညျ့ရအောငျပါ..Energy Net 'စှမျးအငျပိုကျကှနျ' လို ဆောငျရှကျတတျပါသေးတယျ ..။
ဂဟေစနဈ နယျနိမိတျ တှေ ကိုဖွတျကြျောသှားသော သဘာဝအရငျးအမွဈတှေ …မွဆေီလှာ အာဟာရ ဓာတျတှေ နဲ့ စှမျးအငျ တှရေဲ့ ကွီးမားတဲ့ ရှလြေ့ားမှုတှေ ကို Ecotone နရောက ဖမျးယူထားနိုငျပါတယျ..။
ထငျရှားလှတဲ့ဥပမာ အနနေဲ့ ကြှနျမတို့ ဧရာဝတီ ဖွဈဝကြှနျးပျေါဒသေ ဟာ ဂဟေစနဈ ၂ခု ထပျနတေဲ့ Ecotone နရောဖွဈတာကွောငျ့ မွဆေီသွဇာ ထကျသနျသလို ပငျလယျ ပြျောမြိုးစိတျတှေ ရှငျသနျ ပေါကျရောကျ ကာ မွနျမာနိုငျငံ ရဲ့ တခွားသောဒသေတှထေကျထူးခွား တဲ့ ထှကျကုနျမြားစှာ ထှကျ ရှိ နတောမို့ အရေးကွီးတဲ့ ဂဟေ စနဈ ဆုံရာနရောအဖွဈ တနျဘိုးထားတတျဘို့ လိုလှပါတယျ…။
မွဈဝကြှနျးပျေါဒသေ အပွငျ သဘာဝတှငျရှငျးလငျးစှာတှမွေ့ငျနိုငျတဲ့ Ecotone တှကေအမြားကွီးရှိပါသေးတယျ..။
-ဒီရတေောဂဟေစနဈ (ကုနျးမွေ / ပငျလယျ ရေ မကျြနှာပွငျ)
-သန်တာကြောကျတနျးဂဟေဗဒေ (သန်တာ ကြောကျတနျး / သမုဒ်ဒရာမကျြနှာပွငျ)
-ကမျးရိုးတနျးဒသေမြား (မွဈခြောငျးမြားနှငျ့မွဈခြောငျးစီးဆငျရာ ပငျလယျ ကမျးစပျ) သညျဇီဝမြိုးစုံမြိုးကှဲမြားစှာရှိသလို လူ တှေ စားသောကျသုံးစှဲဘို့ ကုနျပစ်စညျးမြားစှာ ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။
သဘာဝဖွဈတညျ မှုအပွငျ လူသားအခွခေနြထေိုငျခွငျးတှကွေောငျ့လညျး Ecotone တှေ ရှိလာနိုငျပါသေးတယျ..။
တောငျစောငျးမြားနှငျ့လှငျပွငျမြား၊ သဈတော နဲ့ စိုကျခငျး မြားကွား မှာ
ထုတျလုပျမှုမွငျ့မား တဲ့ Ecotone တှနေို့ငျသလို တနျဘိုးထားအသုံးခသြလို ဒီသဘောမြိုး ပွုလုပျ တညျဆောကျနိုငျပါတယျ..။
ဂဟေစနဈမြားသညျသူတို့ကိုယျသူတို့ရပျ တညျပွီး အထီးကနျြစှာမလုပျဆောငျနိုငျကွပါဘူး..။ဂဟေစနဈ တဈခု နဲ့ တဈခု အပွနျအလှနျ အမှီသဟဲ တှေ ပွုကွပါတယျ..။
ဒီသဘော တရားကို သခြောလလေ့ာ နားလညျ နိုငျမယျ ဆိုရငျ Permaculture Design တှေ ဘာကွောငျ့ ဒီလို ဆှဲရတာလညျးဆိုတာ ပိုသဘောပေါကျလာပါလိမျ့မယျ..။
နယ် မြေစည်းခြား အကျိုးတရား Ecotone and Edge Effect ကိုနားလည်ခြင်း
Permaculture ရဲ့ အခြေခံ အယူအဆ တွေကို ထိတွေ့ အသုံးချ မိသော်လည်း ဘာကြောင့် ဒီလို လုပ်တယ် ဆိုတာ သိပ်တော့မသိလှပါ…။
Permaculture Design တွေ မှာ ဆို ခရုခွေ လို မြေ ကိုမြင့်တင် တဲ့ ဒီဇိုင်း တွေ တွေ့ မိသလို ဖြောင့်တန်းသော မျဉ်းထက် မျဉ်းကွေး များ ကို အားအင် တစ်ရပ် ဖေါ် ဆောင်သလို အသုံးပြုစိုက် ပျိုးထားတာ တွေ့ ရတဲ့အခါ…သေချာ လေ့လာ မှ ဖြစ်တော့မယ် ဆိုတာ ကျွန်မ သဘောပေါက်မိပါတယ်…။
ပြီးခဲ့တဲ့အပိုင်း မှာ Guild အကြောင်း လေးကိုသေချာ မိတ်ဆက်ခွင့်ရတာကိုကျွန်မ ဝမ်းသာမိခဲ့တယ် ..။ နောက်ဝေါဟာရ တစ်ခု ကို ဒီတစ်ခါ မိတ်ဆက်ပေးချင်မိပါတယ်…။ အကောင်းဆုံးသော အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက် နယ်မြေ ၂ခုကြား အစွန်းနှင့်သဘာဝပုံစံများ ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် အင်္ဂလိပ်လို Ecotone, Edge Effect ကိုကျွန်မ က *နယ်မြေစည်းခြား..အကျိုးတရား *လို့ နာမည် ပေးလိုက်မိပါတယ်…။
ကျွန်မ တို့ စိုက်ပျိုး ရေး ပြုလုပ်တဲ့ အခါ သက်ရှိမျိုးစုံပါဝင်တာ ဖြစ်လို့ သူ့ ဂေဟစနစ် နဲ့ သူ ရှင်သန်ရပ်တည်ကြပါတယ်…။ အဲလို ဂေဟစနစ် များစွာပေါင်းစပ်ပါဝင်တဲ့အခါ တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု ကြား မှာ နယ်စပ်….(Edge )ဆိုတာ ရှိတတ်ကြပါတယ်..။
သဘာဝ အတိုင်းရှိနေတဲ့ Edge တွေ ကိုပြန်လည် စဉ်းစားနိုင်ပါတယ်…။ အဲဒီသဘာဝ ကိုတုပ ပြီး ကျွန်မတို့ Permaculture Design မှာ ထိုအကျိုးတရားကို ရရှိအောင် ရေးဆွဲ စိုက်ပျိုး ကြပတယ်..။ ဒီလို တုပခြင်းဖြင့် ဇီဝမျိုးကွဲကြွယ်ဝ မှု တိုးပွားတာသလို ကုန်ထုတ်စွမ်းအား လည်းတိုးတက်လာစေပါတယ်..။
နယ် မြေစည်းခြား အကျိုးတရား Ecotone and Edge Effect အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာအယူအဆဖြစ် ပါတယ်…။ ဒီအကြောင်း တွေ Ecology မှာသင်ခဲ့ဘူးတာမို့ ဆရာဆရာမ တွေ ကိုတကယ်ပဲ ကျေးဇူးတင် မိပါသေးတယ်..။
Edge ဆိုတာကတော့အင်္ဂလိပ်စကားလုံး ဖြစ်တဲ့အတွက် တိုက်ရိုက် အစွန်း( စည်းခြားနယ်မြေ) လို့ တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပါယ် ပြန်လို့ ရသော်လည်း ၊Ecotone ဆိုတာကတော့ ဂရိ စကားလုံး ဖြစ်ပါတယ်..။Eco+ Tonos = Ecotone ဖြစ်လာပါတယ်…။
Tone = Tonos = Tension လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်…။ ဂေဟစနစ် ၂ခု ဆက်စပ်တဲ့ နယ် ခြား မှာ ဆက်စပ်တဲ့ ဂေဟ စနစ် ထက်ပို ပြီးအကျိုးများ တဲ့ အနေအထားကို ဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်…။
၁။ပင်လယ် ကမ်းခြေ (ပင်လယ် ဟူသောဂဟစနစ် နဲ့ မြေပြင် ဟူသောဂေဟစနစ် ဆုံဆည်း တဲ့နေရာ)
၂။ သစ်တော နဲ့ မြက်ခင်း ဆက်စပ်တဲ့နေရာ
၃။ မြစ်နဲ့ ပင်လယ် ဆုံစည်း တဲ့ မြစ်ဝကျွန်းပေါ် လိုနေရာများ …စသည်ဖြင့် များစွာ ရှိပါတယ်…။ ထိုနေရာ တွေရဲ့ ထူးခြား မှု တွေ အကျိုးကျေးဇူတွေကို စဉ်းစားနိုင်ရင် ကျွန်မ တို့ Edge Effect တို့ Ecotone တို့ကို အတော်အတန် သဘောပေါက်မိပါလိမ့်မယ် ..။
ဂေဟ စနစ် ၂ခုရဲ့ အစွန်းတွေ ဟာ ထပ်နေတတ်ပါတယ်..။ ထို ဂေဟစနစ်နှစ်ခုရဲ့ အစွန်း မှာ သင်သည် ဤဂေဟစနစ်နှစ်ခုလုံးမှမျိုးစိတ်များအပြင်ဂေဟစနစ်နှစ်ခုလုံးတွင်မတွေ့ရသော်လည်းအနားနှစ်ဖက်ကြားရှိအကူးအပြောင်းဇုန်၏အခြေအနေနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောထူးခြားသောမျိုးစိတ်များကိုသင်တွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ် ..။
ပထမဆုံးသော ဂေဟစနစ်ဆိုင်ရာဝေါဟာရအချို့ကို ရှင်းလင်းပြတ်သား စွာ သတ်မှတ်ရမယ် ဆိုလျှင် Edge သည် ဂေဟစနစ် ၂ ခု ထိစပ်သော စည်းရိုး လို့ သတ်မှတ်ပြီး
Ecotone ကတော့ထို မတူကွဲပြားတဲ့ဂေဟစနစ် ၂ခု ထိစပ်လို့ ဟိုဘက် နဲ့လည်းမတူ ဒီဘက်နဲ့ လည်းမတူ တဲ့နယ် မြေ တစ်ခု နယ်နမိတ် မျက်နှာပြင်ကို ခေါ်တာလို့ သတ်မှတ်ရပါမယ်..။
Edge ပတ် ၀န်းကျင်ဟာ ဂေဟစနစ် နယ်နိမိတ်များစွာ မှာ သဘာဝကျကျဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိတတ်ပါတယ်..။
ဖေါ်ပြထားတဲ့ ပုံကိုကြည့်မယ် ဆိုရင် Edge Effect ကိုရှင်းလင်းစွာသိမြင်နိုင်ပါတယ်…။
ဒီ ဥပမာ မှာ ဂေဟစနစ်တစ်ခုစီ ကို A နှင့် B လို့နာမည် ပေးထားမယ် ။ ဒီဂေဟစနစ် ထဲ မှာ လေးထောင့် နဲ့ အဝိုင်း အနီရောင်၊ အပြာနှင့်အဝါရောင်မျိုးစိတ်သုံးမျိုးသာရှိပါတယ်..။
ဂေဟစနစ် A မှာ လေးထောင့် ပုံစံ ဖြင့်ကိုယ်စားပြုသောမျိုးစိတ် ၃ မျိုးပါဝင်ပြီးဂေဟစနစ် B တွင် ၃ ကိုစက်ဝိုင်းများဖြင့်ကိုယ်စားပြု တဲ့မျိုးစိတ် ၃မျိုးပါဝင်ပါတယ်..။
Ecotone ဟုခေါ်သော ဂေဟ စနစ် ၂ခုထပ်နေတဲ့ အဝန်းအဝိုင်း မှာ အနီရောင်၊ အပြာနှင့်အဝါရောင်လေးထောင့် ကွက်များနှင့်စက်ဝိုင်းများရှိ နေသလို
လေးထောင့်နဲ့ စက်ဝိုင်းပေါင်းစပ်မှု (မျိုးစိတ်ခြောက်ခုကိုကိုယ်စားပြုသော) ထူးခြားတဲ့ အခြေအနေများကိုဖြစ်ပေါ်စေတာ တွေ့ ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။ ယခုပုံ မှာ Ecotone အတွင်း အနီ၊ အပြာနှင့်အဝါရောင်တြိဂံများအဖြစ်ကိုယ်စားပြုသောမျိုးစိတ်အသစ်သုံးမျိုးကို ဖြစ်ပေါ်နေထိုင်ဘို့ အားပေး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တာတွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်..။
ဒါ့ကြောင့်ဂေဟစနစ် A နှင့် B တစ်ခုစီတွင်မျိုးစိတ်သုံးခုပါ ၀ င်သော်လည်း ထပ်နေသော ကူးပြောင်းရေးဇုန်Ecotone တွင်မျိုး စိတ် ကိုးခုရှိ တာ ကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။
Edge Effect and Ecotone ကို သဘောပါက်ပြီ ဆိုလျှင် ဒီသဘာဝ သဘောတရားကို ကျွန်မတို့ Permaculture မှာဘယ်လို အသုံး ချမှာလဲ ကို ဆက်လက်လေ့လာကြည့် ရပါမယ်..။
အဲလို နေရာမျိုး ဖြစ်အောင်အတုယူ တည်ဆောက် ကာ ဒီဇိုင်းရေး ဆွဲရပါတယ်..။ သီးခြားဂေဟစနစ်နှစ်ခု ထက်ကွဲပြားတဲ့ မျိုးစိတ်များ မတူကွဲပြားစွာပါဝင်နေထိုင်လာ ပြီးအောက်ပါအကြောင်းများကြောင့်ကုန်ထုတ်စွမ်းအားသိသိသာသာမြင့်မားလာတာတွေ့ ရပါတော့တယ်..။
ဂေဟစနစ်နှစ်ခုလုံးမှအရင်းအမြစ်များကို ထို တစ်နေရာတည်း တွင်ရယူနိုင်ပါတယ်..။
လေထုအပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ မြေဆီလွှာအစိုဓာတ်၊ အလင်းရောင်ရရှိမှု စ တဲ့ အခြေအနေများအားလုံးဟာ Ecotone မှာပြောင်းလဲသွားပါတယ်..။
ထိုနေရာများ ဟာ မတူညီ ပဲကွဲ ပြား တဲ့ မျိုးစိတ်များကို အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် microclimates ( ရာသီဥတု အငယ်စား) ကိုရရှိအောင် ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်..။ဒီသဘော ကိုကိုယ့်ခြံမြေ အပြင် ကိုယ့်ရွာ..ကိုယ့်မြို့ ရဲ့ Microclimates ဖန်တီးကြဘို့ သြဂဲနစ် သင်တန်းတွေ မှာကျွန်မ ကြိမ်ဖန်များစွာ ပြောပြခဲ့ဘူးပါတယ်..။
အနားတစ်လျှောက်ရှိအပင်များသို့ အလင်းပိုမိုရရှိ တယ်ဆိုတဲ့အချက်က အပင်များပိုမိုထောက်ပံ့ရန် (ပိုမိုမတူကွဲပြားခြင်း) ဖြင့် ဇီဝမျိုးကွဲ တွေတိုးတက်များပြား စေပြီး စိုက်ပျိုးရေး ထွက်ကုန်များ ထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအား တိုးတက်စေဘို့ တို နေရာများ ကကူညီထောက်ပံ့ပေးပါတယ်…။
ထို နေရာမှာ တိုးပွားလာသောအပင်မျိုးစိတ်များ ဟာ အပင်စားသုံးသော အင်းဆက်ပိုး တွေကို စားသောက် နှိမ်နင်းပေးတဲ့ သားရဲကောင် များကိုတိုးပွားစေပါတယ်..။
အပင်အနိမ့်အမြင့်အလိုက် ခိုလှုံ တဲ့ ငှက်မျိုးစိတ် တွေ ကိုတိုးပွားစေပြီးနောက်ဆုံးတွင်စိုက်ပျိုးရေး အကျိုးပြု သက်ရှိ သတ္တဝါတွေ ရဲ့ ခိုလှုံနေထိုင်ရာ နေရာဖြစ်လာပါတော့တယ်..။
Ecotone နေရာတွေ ရဲ့ အကျိုးကျေးဇူး သက်ရောက်မှု
နောက် ဝေါဟာရ တစ်ခုကတော့ ကျွန်မ အလွန်နှစ်သက် မိပါတယ်..။ အင်္ဂလိပ်လို ပဲမှတ်ကြည့်ရအောင်ပါ..Energy Net 'စွမ်းအင်ပိုက်ကွန်' လို ဆောင်ရွက်တတ်ပါသေးတယ် ..။
ဂေဟစနစ် နယ်နိမိတ် တွေ ကိုဖြတ်ကျော်သွားသော သဘာဝအရင်းအမြစ်တွေ …မြေဆီလွှာ အာဟာရ ဓာတ်တွေ နဲ့ စွမ်းအင် တွေရဲ့ ကြီးမားတဲ့ ရွေ့လျားမှုတွေ ကို Ecotone နေရာက ဖမ်းယူထားနိုင်ပါတယ်..။
ထင်ရှားလှတဲ့ဥပမာ အနေနဲ့ ကျွန်မတို့ ဧရာဝတီ ဖြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ဟာ ဂေဟစနစ် ၂ခု ထပ်နေတဲ့ Ecotone နေရာဖြစ်တာကြောင့် မြေဆီသြဇာ ထက်သန်သလို ပင်လယ် ပျော်မျိုးစိတ်တွေ ရှင်သန် ပေါက်ရောက် ကာ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ့ တခြားသောဒေသတွေထက်ထူးခြား တဲ့ ထွက်ကုန်များစွာ ထွက် ရှိ နေတာမို့ အရေးကြီးတဲ့ ဂေဟ စနစ် ဆုံရာနေရာအဖြစ် တန်ဘိုးထားတတ်ဘို့ လိုလှပါတယ်…။
မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ အပြင် သဘာဝတွင်ရှင်းလင်းစွာတွေ့မြင်နိုင်တဲ့ Ecotone တွေကအများကြီးရှိပါသေးတယ်..။
-ဒီရေတောဂေဟစနစ် (ကုန်းမြေ / ပင်လယ် ရေ မျက်နှာပြင်)
-သန္တာကျောက်တန်းဂေဟဗေဒ (သန္တာ ကျောက်တန်း / သမုဒ္ဒရာမျက်နှာပြင်)
-ကမ်းရိုးတန်းဒေသများ (မြစ်ချောင်းများနှင့်မြစ်ချောင်းစီးဆင်ရာ ပင်လယ် ကမ်းစပ်) သည်ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများစွာရှိသလို လူ တွေ စားသောက်သုံးစွဲဘို့ ကုန်ပစ္စည်းများစွာ ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။
သဘာဝဖြစ်တည် မှုအပြင် လူသားအခြေချနေထိုင်ခြင်းတွေကြောင့်လည်း Ecotone တွေ ရှိလာနိုင်ပါသေးတယ်..။
တောင်စောင်းများနှင့်လွင်ပြင်များ၊ သစ်တော နဲ့ စိုက်ခင်း များကြား မှာ
ထုတ်လုပ်မှုမြင့်မား တဲ့ Ecotone တွေ့နိုင်သလို တန်ဘိုးထားအသုံးချသလို ဒီသဘောမျိုး ပြုလုပ် တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်..။
ဂေဟစနစ်များသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့ရပ် တည်ပြီး အထီးကျန်စွာမလုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါဘူး..။ဂေဟစနစ် တစ်ခု နဲ့ တစ်ခု အပြန်အလှန် အမှီသဟဲ တွေ ပြုကြပါတယ်..။
ဒီသဘော တရားကို သေချာလေ့လာ နားလည် နိုင်မယ် ဆိုရင် Permaculture Design တွေ ဘာကြောင့် ဒီလို ဆွဲရတာလည်းဆိုတာ ပိုသဘောပေါက်လာပါလိမ့်မယ်..။
စာရေးသူ သစ္စာအလင်း at 3:54 AM